အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု များအပေါ် မြန်မာပြည်သူတစ်ဦး၏ ခံစားချက် (၆)
ပြည်သူတွေကိုပဲ ချေမှုန်းဖို့ မဟာရန်ကုန်လုံခြုံရေးစီမံချက်ကြီး
Menteri-Menteri Bebal Ini Bangga Bergambar Dengan Seorang "Penjenayah"
16 combat aircraft to boost our security
Mudslinging and Misinformation in Political Campaigns
” မြန်မာ ဟာ မြန်မာပါဘဲ ကွယ်” (မုဓိတာဝေဖြာ)
Manila is no longeragood friend
The Parliament has yet to be dissolved and many Malaysians like me at the stage where we just want to get it over and done with and move on to the next phase of this nations's development. The fact remains that since the unexpected result of the 2008 election, more have been fooled and deluded by all the pressies, sweet promises and new melodies that are being sung in various keys and rhythmic tempo till the actual day of reckoning.
It is saddening to note that there are many who have indulged in political forgetfulness. Some may have forgotten what their candidate DID and/or DID NOT DO. Not only do they forget the service record of candidates but also all the challenges or struggles faced in the history of this nation, and how empty promises were never kept.
Tell me, please. In the past few months when leaders talk about the elections, have they ever had the guts to talk about THEIR SERVICE record? Few have done. Whilst some may have done that sincerely, there could be others who have tried to ride on the glory of others and pass these off as their own. And what have they been telling us? The results of their fault-finding mission as to why the other side is NOT good whilst they are the best. Fair? Mature?
The saddening likelihood is that come this election, history is likely to be repeated when people forget the past so much that they will vote blindly or supposedly loyally by voting the party of their choice without considering the quality of the candidate thereby ensuring that the insanity not only persists, but has become endless.
Judging from the past, when the campaign trail gets more exciting, voters can become irrational in their judgement when the speeches/statements heat up and gets scandalous, spicy and thrilling. In the process, asaresult of disinformation, inabid to assuage the pain, many may subconsciously remember no more the pain, misery and disappointment suffered under their ADUN or MP.
Instead, time is wasted when opposing camps argue over who is right and who is wrong with little regard of the people's needs except when making promises that are not likely to be kept!
What is sorely needed is an honest to goodness assessment of the suitability of each candidate and leave it to the people to judge and to confirm whether or not he isapolitical serial liar, exaggerator or justacharismatic speaker or whether indeed he has ALL the qualities of an elected representative.
Is it rational for voters to voteasecond time for their representative who has failed to deliver what has been promised in the previous election and if history shows he/she has been nothing butapolitical liar? A particular candidate who has failed to deliver the package of promises promised in the last election must be written off. Also, those who have served for MANY terms. They need to give way to young blood to be at the helm while they retire gracefully foragood rest.
I am so fed up to see HOW SELFISH are some politicians who do not regard the needs of the people in different constituencies but treat the whole election process asalottery whereby they DECIDE to stand for election in DIFFERENT constituencies because of party rationale/agenda and reasons that are NOT related to the people's needs. Shouldn't each candidate ASSESS the situation in each constituency and evaluate for themselves if indeed they are the best candidate for that area instead of flying from north to south in an effort to ensure victory? Selfishness or patriotism?
The sad truth is that many media reports may not present an accurate depiction of reality and instead, help or distract people to forget their past experiences and to accept half-baked statements or promises that were never delivered in the previous or coming election. Why? Because one can be easily beguiled if we do not critically think about situations, speeches and quality of candidates.They may have even one too many chances for the representative to serve the people and not just look at the dollars and cents over here.
How I wish there will comeatime when voters are savvy to the means and content of communication and be immovable and never persuaded by sweet talk and whatever meaningless handouts that beggars will not even accept.
I guess we are all tired. Tired of lies...games...broken promises...and the worst deal is that many others will succumb to the same pattern. Whatacrying shame!
I wonder how many of us are aware of the job description of elected representatives and whether we have realistic expectations of what they need to do to serve the people and whether they only vote for candidates who can work for their interests or that of their families and neighbours.
The other dangerous trend is how die-hard supporters ofacandidate (who may also be key personnel in the election campaign) unconsciously puts themselves in the centre thinking that the elected representative owes themadebt which can only be settled when they ask the candidate forafavour next time. Hence, leaders should concentrate on IMPROVING THEIR PARTY and CANDIDATE instead of being selfish and trying to achieve their hidden agenda.
As the election draws close at hand, let us really do our homework and check up on the party and the candidate so that only the best candidate with the most suitable personality, experience and aspiration is elected and who is truly willing to serve the community is elected. Let us guard ourselves from becoming victims of propaganda, disinformation or misinformation. Think, analyze, reflect, digest and really assess election manifestos, speeches, election paraphernalia and do not simply believe what the content of what you read, watch or listen.
Whatever the case, don't get fooled again by either the party, person, propaganda, presents etc but seriously gauge the QUALITY of the candidate and their sincerity and willingness to serve the PEOPLE and not their masters!!!
Posted: 28 Mar 2013 07:19 AM PDT
လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု များအပေါ် မြန်မာပြည်သူတစ်ဦး၏ ခံစားချက် (၆)
"ငါ … ရင်ထဲမှာ ကျိတ် ဆဲချင်စိတ် ပါ မျိုသိပ်လိုက်ပါတော့တယ် ……."
မနက်ဘက်မှာ ခံစားစရာတွေရေးရတာတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရင်ထဲမထားနိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်လာရတာကြောင့် မနေနိုင်လို့ရေးပါအုံးမည်။ ခံစားရတာတွေအတွက် ရင်ဖွင့်ချင်သူတွေကို တစ်ယောက်ချင်းလိုက်ပြောမနိုင်လို့ စာရေးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် ဖုန်းသံတစ်ခုနဲ့နိုးလာပါတယ်။ ဇီးကုန်းက ဦးလေးတစ်ယောက်။ မင်းအဖေနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့။ အဖေက အုတ်ဖိုမှာ။ ဦလေး … အခြေနေ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 'ကုန်ပြီတဲ့။ ငါ့အိမ်ရော ဆိုင်ရော အကုန်ဝင်ဖျက်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတယ်'တဲ့။ ဦးလေး ၁၄၄ ထုတ်ထားတယ်ဆို လို့ပြောတော့ 'အလကားပါကွာ ငါ့တူရာ၊ ထုတ်တာ ထုတ်တာပဲ'တဲ့။ ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်သွားတယ်။ အဲ့ဒီဦးလေးမိသားစု ကို ၂၅-ရက် နေ့က ဖုန်းဆက်ပြီး ကျန်တဲ့မြို့တွေမှာဖြစ်နေပြီ ခုထိ မပြင်ဆင်သေးဘူးလားဆိုတော့ 'ငါတို့ အိမ်ရှေ့မှာ ရဲတွေရော စစ်တပ်ရော ရောက်နေပြီ'တဲ့။ ဖြစ်ပြီးတဲ့နေရာတွေမှာ အဲ့ဒီရဲနဲ့ စစ်တပ်ရှေ့မှာပဲ လုပ်သွားကြတာလေ ဆိုတော့မှ ဖုန်းချပြီး 'လူပဲအလွတ်ပြေးကြတယ်။ ခုတော့ သူက အလကားပါကွာ'တဲ့။ ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်တော့။အခုဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ 'နေ့ဘက်တွေအိမ်ထဲမှာ ပုန်းနေပြီး ညဘက်ဆို အခြားနေရာတွေမှာ ပုန်းနေကြရတယ်'တဲ့။ ဆုတောင်းပါ့မယ်ဦးလေးရယ် ဆိုတာက လွဲပြီး ဘာမှ ထပ်မပြောနိုင်တော့။
အဖေနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ အုတ်ဖိုက ဖုန်းရှိနေတဲ့ ညီလေးဆီလှမ်းဆက်လိုက်တယ်။ မင်းတို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ အိမ်မှာ ပြန်နေနေပြီတဲ့။ အခြေနေအေးပြီလားဆိုတော့ အေးတော့အေးပြီတဲ့။ ဒီနေ့တော့ လူတွေလာသတ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေတယ်တဲ့။ အေး … အေး … မင်းနဲ့နောက်မှပြောမယ်။ ငါ့အမေကိုဖုန်းပေးလိုက်ဆိုပြီး အမေနဲ့ ပြောရတယ်။ အဖေ နေမကောင်းဘူးဆိုတာက သွေးတိုးအခံကရှိ၊ နှလုံးရောဂါက ရှိနေတဲ့အထဲ အိပ်ရေးတွေ ညစဉ်ပျက် သွေးပျက်အောင် ထိတ်လန့်နေခဲ့ရတော့ အစားက မ၀င်။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးလိပ်တွေ ဖိသောက်၊ ရင်ကျပ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်တာတဲ့။ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့ပါတော့အမေရယ်၊ သားတနည်းနည်းနဲ့ ရအောင်ခေါ်ပါ့မယ်ဆိုတော့ မလာချင်ဘူး သားလေးတဲ့။ အမေတို့ပဲ မြို့မှာကျန်တော့တာတဲ့။ အခု အမေတို့ အိမ်တွေကိုမီးကွင်းပစ်ပြီး မီးရှို့မယ်ပြောနေကြတယ်တဲ့။ မီးလောင်ရင် ကုလားတွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို့ပြေးကြတယ်ပြောလို့ရအောင်တဲ့။အဲ့တာကို အမေတို့ကာကွယ်ရမယ်တဲ့။ မီးကွင်းလာပြစ်တာနဲ့ အမေတို့မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသူလာပစ်နေပါပြီဆိုတာကို အကြောင်းကြားရမယ်တဲ့။ အိမ်တွေ ပစ္စည်းတွေအကုန် လုယက်ဖျက်စီးခံရတဲ့လူတွေက ကိုယ်တရားခံမဖြစ်အောင် လောက်ပဲပြန်ပြီး ကာကွယ်နေရသေးလား။
ညီလေးနဲ့ ဆက်ပြောတယ်။ မင်းတို့ဆီမှာ ဘယ်သူတွေလုပ်တာလဲ သိလားဆိုတော့ သူပြောပြတော့မှ ရင်ထဲမှာ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ သိတာပေါ့ကိုကိုရာတဲ့။ မြို့ထဲက လူတွေနာမည်၇ွတ်ပြတယ်။ ကျွန်တော် သွေးပျက်ချောက်ခြားသွားတယ်။ ကျွန်တော်သိထားတာက အပြင်က မျက်နှာစိမ်းတွေ လာပြီးလှုံ့ဆော်တာကို ရွာက မသိတဲ့တောသားတွေက လာလုပ်တာပါလို့လေ။ အခုတော့ မြို့ပေါ်မှာ ငယ်ငယ်တည်းက တူတူကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေ၊ အရမ်းခင်မင်စွာပေါင်းလာတဲ့သူတွေ၊
ဒီလူတွေ ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလူတွေက ဘယ်လိုစိတ်တွေ သွင်းပေးလိုက်တာလဲ။ ဒီလူမျိုးက နဂိုတည်းက ဒီလိုမျိုးလား။ အလကားရမယ်ဆိုရင် မျက်နှာမထောက်တမ်း ဘယ်သူ့ဟာမဆို လုယူချင်တဲ့ လူမျိုးတွေလား။ ဒီကိစ္စ စပြီးလှုံ့ဆော်နေသူတွေကို သိလားဆိုတော့ လူတိုင်းသိနေတာပဲလေ။တဲ့ သူလူနှစ်ဦးနာမည်ပြောပါတယ်။တစ်ယောက်က တရုတ်၊ တစ်ယောက်က ဟိန္ဒူ။ အော် …. လုပ်ရက်လိုက်တာ တစ်ခုခုဆို သူတို့ဘက် လှည့်မလာအောင် ဒီမိသားစုတွေဘက်ကို ရေလိုက်လွှဲပေးထားတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကို စိတ်နာလို့မဆုံးခင် အံ့သြစရာ ထပ်ကြားရပြန်ပါတယ်။ မနေ့က ဗလီထပ်လာဖျက်သေးတယ်တဲ့။သုံးရက်မြောက်ပေါ့။ လူတွေတော့သိပ်မပါဘူးတဲ့။ ဗလီအပေါ်က အခုံးကို ကရိန်းနဲ့လာဆွဲတာတဲ့။ အဲ့တာကို ဘုန်းကြီးတွေက မလုပ်ဖို့ခေါ် တရားချပြီးပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ရဲစခန်းမှာ ခေါ်မေးခံရတဲ့သူတွေကိုလည်း မေးပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲတဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဖမ်းပါဘူးတဲ့။ ဒါတို့တိုင်း တို့ပြည်တဲ့လား။ ဗလီ တစ်လုံးကိုဖြိုတဲ့အတွက် သာမန်ဆုံးမယုံပဲလား။ ညီလေးက ဘေထုတ်ရောင်းတော့ သူ့အိမ်က ဘေထုတ်တွေကို ပုံပြီး ဓါတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ဖို့လုပ်နေတာကို မြင်တာနဲ့ လိုက်ဖမ်းတာ မမိဘူးတဲ့။
ဒီစကားတွေကြားရတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားရမလဲ။ ငါတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ငါတို့ကိုဘယ်လိုသဘောထားနေလဲ။ ကျွန်တော်မနေ့ကရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ငါတို့ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ကုန်ကုန်ပြောရင် မြို့မှာ အင်္ကျီရှည်တောင်ဝတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ဘာအငြိုးမှ မရှိဘူးဆိုတော့ ငါသိလိုက်တာတစ်ခုပါပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အယဉ်ကျေးဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုပါဆိုတာ သီချင်းသက်သက်လေလား။ ဒီလိုရေးလိုက်တော့ ငါ့အသိဥာဏ်က ပြန်ပြီးကန့်ကွက်တယ်။ ငါ့မိသားစုတွေကိုဘေးမသီရန်မခအောင် ဒီသုံးရက်လုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာလည်း ဒီမြို့က ဒီလူမျိုးတူတွေပဲ။ ဒီတော့ ငါဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။ မျက်နှာမထောက်စတမ်း သူများရှူးတိုက်ပေးတမ်းကိုက်တဲ့ လူတွေကိုလား။ဒါမှဟုတ် သူများရှူးတိုက်ခိုင်းတိုင်း ရှူး … ရှူး အော်ပေးတဲ့ တရုတ် နဲ့ ဟိန္ဒူ ကိုလား။ ဒါမှမဟုတ် ရှူးတိုက်ခိုင်းတဲ့ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ သူကိုလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေ အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပြီးတိုင်း ပြည်သူ့ငွေတွေ လစဉ်ပေးနေရတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေကိုလား။ကုလားဖြစ်နေနေရတဲ့ ငါတို့ ဘ၀တွေကိုလား။
ဒီအုပ်ချုပ်ရေး ရဲနဲ့ စစ်တပ်က ဒီကိစ္စတွေအကာကွယ်မပေးနိုင်ရင် သူတို့ ရှိနေရခြင်းက ဘာအတွက်လဲ။ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ ၀ယ်ထားတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေကရော ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ သုံးဖို့ မဟုတ်လေသလား။ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့ကပဲ ပြည်သူမဟုတ်လေသလား။ သေချာတာတော့ ငါ့အထက် မျိုးဆက် သုံးဆက် အထိငါမြင်ခဲ့တာတော့ ဒီမြို့လေးမှာ နေခဲ့ကြတယ်။ သေချာတာတော့ အထက်မျိုးဆက် နှစ်ဆက်အထိ ဗမာ့သွေး စစ်စစ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ငါအခု ရင်မှာ မချိလို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ဆဲလည်း ငါ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ သွေးနဲ့မကင်းတဲ့ အမျိုးတွေပဲဖြစ်နေပြန်တော့ …. ငါ …….. ရင်ထဲမှာ ကျိတ် ဆဲချင်စိတ် ပါ မျိုသိပ်လိုက်ပါတော့တယ် …………… ။
Posted: 28 Mar 2013 06:06 AM PDT
Source: Moe Zay Nyein's status
ရန်ကုန်မြို့လို နေရာမျိုးမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရတာ အင်မတန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ပြည်သူတွေက ကိုယ့်လုံခြုံရေးကို ကိုယ့်ဘာသာဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ဖွဲ့ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာတွေလုပ်နေကြလို့လဲ။ စစ်တပ်လို့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့လို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရဲ့သားနဲ့ အရပ်သားတွေက ကျီးလန့်စာစားနေရတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ပြောရမှာတောင် ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
အင်အားမလုံလောက်လို့တို့၊ သတင်းရနောက်ကျတာတို့၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို ရောက်ချိန် နောက်ကျတာတို့နဲ့ ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့။ ရန်ကုန်မြို့အတွက် စနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ လုံခြုံရေး စီမံချက်ကြီး ရှိပြီးသားပါ။ အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ လုံခြုံရေးစီမံချက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ တပ်ဖြန့်နေရာယူပြီး နာရီဝက်အတွင်း အတွင်းစည်း (၁၉) နေရာနဲ့ အပြင်စည်း (၁၉) နေရာမှာ တပ်ဖြန့်၊ ပိတ်ဆို့နေရာ (၁၈၄) နေရာနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တစ်ခုလုံးကို ပိတ်ဆို့ပြီး မလိုလားအပ်သူတွေကို ချေမှုန်းနိုင်တဲ့ စီမံချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့ တံတား (၁၁) ခု၊ သင်္ဘော/သမ္ဗာန်ဆိပ် (၁၀) ခု၊ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းနေရာ (၅) ခုကို ပိတ်ဆို့ပြီး ကြွက်တစ်ကောင်၊ ကြောင်တစ်မြီး မလွတ်ရလေအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုခုဖြစ်ပွားတာနဲ့ ခရိုင်ယာဉ်တင်အသင့် အရာရှိ (၁)၊ အခြားအဆင့် (၅) ဦးက (၁၅) မိနစ်အတွင်း ရောက်ရှိပြီး ပိတ်ဆို့ရေးလုပ်၊ ခရိုင်အင်အားအသင့်လုပ်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့ အရာရှိ (၄)၊ အခြား အဆင့် (၃၆) ယောက်တို့ကလည်း ချက်ချင်းရောက်လာပြီး ရှင်းလင်းနှိမ်နှင်းရေး လုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။
ဒီလို ပြည့်စုံတဲ့ မဟာရန်ကုန်လုံခြုံရေးစီမံချက်ကြီး ရှိပါလျက်နဲ့ ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့်နဲ့ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရဘူးဆိုတော့ ရှက်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီ စီမံချက်ကြီးက ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့မဟုတ်၊ အုပ်ချုပ်သူလူတစ်စုကိုပဲ အကာအကွယ်ပေးဖို့သက်သက် ရေးဆွဲထားတာ၊ အာဏာရှင်ရဲ့ ထိုင်ခုံကို ကိုင်လှုပ်တဲ့ ပြည်သူတွေကိုပဲ ချေမှုန်းဖို့ စီမံထားတာဆိုရင်တော့ …………………..။
(အလုပ်အားတဲ့တစ်နေ့နေ့ကျရင် အဲ့ဒီ စီမံချက်အကြောင်း သေသေချာချာရေးပါဦးမယ်)
Posted: 28 Mar 2013 08:14 AM PDT
Kenyataan berkenaan juga menerangkan kedudukan Azri sebagai pengundi pos secara 'panjang lebar' selepas penamatan perkhidmatan sebagai anggota polis.
Posted: 28 Mar 2013 03:45 AM PDT
he Republic of Union of Myanmar
The Statement (2/2013)
1. The public living peacefully have felt sorrow at currently happening riots.
2. Such riots are not considered as conflicts between Buddhists and Muslims.
3. Sanghas, Buddhists, Christians and Hindus, who aided victims without racial and religious bias, are deeply thanked.
4. The whole process is just the action ofaterrorist group who wants to make the peaceful and tranquil situation of the nation unrest by their well-plotted jeopardizing under the name of religion.
5. It is analyzed that loss of Muslims' lives and properties, mosques and religious schools in this way are due to weakness and omission of administrative authorities to provide protection and take action effectively.
6. It is asked to take action promptly and efficiently to offenders and main organizers who are backing them in accordance with prescribed laws and criminal acts.
Posted: 28 Mar 2013 03:41 AM PDT
Vimuttisukha Bliss's status
ဒါအတွေးအခေါ် အမှန်ပဲ လေးစားပါတယ် ဆရာတော်ကြီးခင်ဗျား
ှQuote Of The Day
"ခု ခဏ ခဏ ပြောပြောနေကြတာက ဗမာအမျိုးသမီးလေးတွေ ကုလားမယားဖြစ်ကုန်မယ် ဆိုတာ အားလုံးကြားကြရမှာပါ..။ ခုဖြစ်နေတာက ကုလားမယားထက် ပိုဆိုးတဲ့ အများမယား (ရိုင်းရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ဗုိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာသည်) တွေက ပိုပိုများများလာတယ်..။ ကုလားမယားက ရေတွက်လို့ ရတယ်..။ အများမယားက ရေတွက်လို့ မရဘူး။
မချမ်းသာတဲ့ဗမာအမျိုးသမီးကို ကုလားကသာမက လမ်းဘေးကသူတောင်းစားကတောင် တောင်းရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပျော်ပါးခွင့်ရှိလာမယ်။ မချမ်းသာတဲ့ ဗမာတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ပညာမတတ်တဲ့ ဘုန်ကြီးတွေကို ဘယ်သူကမှ လေးစားမှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံချမ်းသာမှ၊ နိုင်ငံဥပဒေစိုးမိုးမှ အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာ လေးစားစရာဖြစ်လာမယ်။
ကွမ်းယာဆိုင်၊ သူတောင်းစားခွက်နဲ့ တဲသာသာ အိမ်စုတ်မှာ ရေးထားတဲ့ ၉၆၉ ကို ဘယ်သူမှ လေးစားမှာ မဟုတ်။ ဘီဂိတ်ရဲ့ အိမ်တံခါးမှာ ဘာမှ ရေးမထားလဲ သူဘာဆိုတာ သိတယ်။"
(ယနေ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဆီမှ ကြားနာမှတ်သားခဲ့ရပါသည်။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ )
Posted: 28 Mar 2013 03:20 AM PDT
AMAN demands that the Myanmar Government bring those responsible for this tragedy to justice immediately. We also insist that the government take action against the perpetrators of these heinous acts of violence, particularly those who are involved in hate speeches against the minority Muslims.
In recent times, two waves of riots against Rohingya in Rakhine State resulted in many people losing their lives and property. Myanmar, which has one of the worst records of human rights abuses in the world, also has one of the most oppressed and persecuted communities in the world; the Rohingya.
Recent violence seems to correlate with the country's long due democratization and healing process between and among various ethnic communities towards creating opportunities for accelerated process of development efforts in cooperation with international communities.
In Meikhtila, reports state that approximately 130 Muslims and 30 Buddhists have lost their lives due to fresh violence. Fifteen Mosques, five Islamic Schools and buildings have been damaged which left many families homeless.
Reports say that although it is more controlled in Meikthila, the atrocities have spread to nearby towns and villages throughout the region.
AMAN demands that the Myanmar Government not only stops the ongoing violence but prevents future tension between majority Buddhists and minority Muslims by stopping the hate speeches that are currently being spread by groups such as the "969 gang."
The Myanmar Government must allow all its IDPs to resettle with adequate security provisions.
We also urge the Organization of Islamic Countries (OIC) and UN bodies to call upon the Myanmar Government to stop such violence immediately.
AMAN urges the Myanmar Government to compensate the victims of violence adequately regardless of ethnicity or religion, to rebuild their homes and livelihood community.
We finally appeal to all civil society organizations, both within and outside of Myanmar, to act by strengthening mutual cooperation and dialogue in order to stop and prevent such happenings in the future.
Posted: 28 Mar 2013 03:19 AM PDT
Finally it comes. We will buy 16 combat aircraft from5shortlisted makers, thus adding strength to our defense.
There were plans to do so in the past, especially to replace the aging Russia-made machines but as the government gives heavy emphasis in combating poverty and unemployment - not forgetting the massive development plan for the people - it was delayed.
However, the announcement by Defense Minister Ahmad Zahid Hamidi today wasaboost to national security. The opposition should not take it as 'politically motivated' as the government took the Suluks intrusion in Lahad Datu, Sabah asalegitimate reason for the purchase.
While Asean countries such as Singapore, Indonesia and Thailand are also spending on their defense, we should not be kept at bay.
LANGKAWI, Malaysia, March 28 (Reuters) - Malaysia has
shortlisted five manufacturers as it seeks to buy 18 combat
aircraft by 2015 to replace its ageing fleet of Russian-made
MIG-29s, the defence minister said on Thursday.
The choice was between the Britain-backed Eurofighter
Typhoon (pic), Sweden's SAAB JAS-39 Gripen, France's
Dassault Aviation Rafale, Boeing's F/A 18E/F
Super Hornet and Russia's Sukhoi Su-30, Zahid Hamidi told
"We've made the shortlist," Zahid said on the sidelines of
the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition.
"We don't know the cost yet."
A good move....although it wasalittle too late!
SEREMBAN: PAS Negeri Sembilan menasihatkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Mohamad Hasan agar mendapatkan restu daripada Yang DiPertuan Besar Tuanku Muhriz ibni Almarhum Tuanku Munawir untuk meneruskan tugas beliau sebagai Menteri Besar di bawah 'caretaker government' atau kerajaan sementara.
"Mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan Akta Interpretasi 1984 dan 1967, meneruskan peranan sebagai Menteri Besar di bawah 'caretaker government' mestilah mendapat restu Yang DiPertuan Besar Negeri Sembilan.
"Kita bukan mahu Mohamad tinggalkan jawatan sebagai Menteri Besar sepenuhnya, tetapi kita tidak mahu rakyat keliru dengan situasi yang berlaku di Negeri Sembilan. Tambahan pula sekiranya Menteri Besar dan Exco masih lagi berlagak dengan kuasa Menteri Besar dan Exco sebelum ini.
"Kerana fungsi bagi kerajaan sementara adalah terhad. Tidak boleh membuat sebarang keputusan kritikal seperti meluluskan tanah, projek kerajaan atau menyampaikan bantuan kerajaan.
"Maka cara yang terbaik untuk elakkan kekeliruan adalah dengan (Perdana Menteri) Datuk Seri Najib Tun Razak membubar parlimen segera," kata Ketua Penerangan PAS Negeri Sembilan, Ustaz Norazman Mohamad.
"Saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas jasa beliau dan ingin merakamkan penghargaan di atas sumbangan beliau sebagai Menteri Besar Barisan Nasional yang terakhir.
"Semoga Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU-13) akan membuka lebaran baru dan Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat yang baru akan terbentuk," ujar Mohd Khairil.
"Sementara PKR pula telah menyerahkan kerusi DUN Labu kepada PAS. Pada PRU-13 nanti PKR akan bertanding 13 kerusi DUN, PAS 12 kerusi dan DAP kekal 11 kerusi DUN.
"Peruntukkan kerusi Parlimen juga kekal seperti PRU-12 iaitu PAS akan bertanding di Jelebu, Jempol dan Tampin, sementara PKR pula di Telok Kemang, Rembau dan Kuala Pilah. DAP pula akan bertanding di Seremban dan Rasah," jelas Mohamad Hasan.
"Kalau dulu taklah menonjol sangat sebab dewan (Dewan Rakyat dan DUN) dibubar sebelum5tahun. Sekurang-kurangnya adalah hujah moral untuk tidak melantik kerajaan sementara secara formal, "Tetapi sekarang ini lain, tarikh 8 Mac sudah jauh ditinggalkan. Tempat berpijak yang ada hanyalah tarikh dewan bersidang buat kali pertama selepas PRU yang lalu. Kalau tarikh yang itu pun sudah luput, apalagi alasan untuk kerajaan ini berada di situ dan menggunakan kemudahan serta wang rakyat," katanya.
Memang pun "Caretaker Government" mengambil-alih dan MB boleh meneruskan peranan sebagai Menteri Besar di bawah 'caretaker government' itu, tetapi mestilah mendapat restu Sultan / Raja / Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertua Negeri masing-masing dan jumlah serta struktur kerajaan di dalam Caretaker government ini tidak sama malah kuasa mereka juga amat terhad.
Posted: 28 Mar 2013 02:13 AM PDT
"Some people have fled since yesterday. Two buses of soldiers from Taikkyi have arrived here. Township Administration officer is also present.
There is nothing unusual. We were worried about the sermon done last night. But the monk who preached last night was good, he didn't say anything propagating against religions." A local from Okkan said to M-Media.
"Muslims including those whose homes were destroyed in Zigone have fled their homes to nearby villages where temporary camps have been opened.
Zigone township funeral service just came to give us some food and water. About 4/5 of Muslim residents are still in the village, which isaBuddhist majority one. Local Buddhist residents are also protecting us. What about Muslims? What will Muslim organizations do? Violence in the western part of Pegu division is the worst. Everyone responsible should do something to help. Otherwise, we will have more problems. Please help so that riots don't occur in other areas."
Subject: Asking to protect Myanmar Muslims' lives and properties due to currently insecure situation
1. At the present time, there have been no securities for Myanmar Muslims' lives and properties, mosques and religious schools increasingly. Now the situation becomes worrying for Muslims even in Yangon.
4. That is why, this Islamic Organization strongly believed that peace and tranquility of the country as well as protection for Muslims' lives and properties, and religious buildings would be given by quick and effective action taken to above mentioned events. Moreover, it is enthusiastically asked to implement promptly the statement (7/2013) of the spokesperson group of Republic of the Union of Myanmar.
by Pyay Chit Thu (Notes) on Tuesday, March 26, 2013
အခုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေမှာ အင်အားကြီးပြီး စံနစ်တကျ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုနောက်ခံပြုပေးမထားဘူး ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးကြမှာလား။ ယုံကြည်ပေးကြမှာလား။
ပြသနာဖြစ်လာပုံတွေကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ကြပါ။ မြန်တယ် ၊ အင်အားပါတယ် ၊ အကွက်စေ့တယ်၊ထိရောက်မှုအားကောင်းလွန်းနေတယ် ၊ အရှိန်အဟုန်နဲ့အဖျက်စွမ်းအားကြီးပါတယ်။ ထိုးစစ်က မြန်ဆန်ထိရောက်သလို ၊ ခွာစစ်က သပ်ရပ်စံနစ်ကျပါတယ်။ ခွာစစ်လမ်းက ဖြောင့်နေတဲ့အပြင် ပုံဖျက်လည်းတော်နေကြပြန်ပါတယ်။
ဈေးသည်နဲ့ဈေးဝယ်/ ရောင်း နှစ်ဦးသား ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပြသနာက နေ့ မကူးခင် လူအုပ်ကြီးပါလာပါတယ်တဲ့။ညတွင်းချင်းပဲ မီးတွေရှို့ တာ မြို့ က သုသန်တစပြင်လိုဖြစ်သွားပါသတဲ့။ နည်းနည်းလေး စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလောက်မြန်ရတာပါလဲ။ ဘယ်ကလူတွေက အဲဒီလောက်များများကြီး ချက်ချင်းကြီးဝင်ပါလာခဲ့ကြတာပါလဲ။ လူအုပ်ကကြီးလွန်းလို့အင်အားနည်းပါးတဲ့ ရဲတွေက မတားရဲပါဘူးတဲ့။ ရုတ်တရက်တော့ ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးချင်ပေမယ့် တစ်ကယ်တော့ အဲဒါက ယုတ္တိဆန်ရဲ့ လား။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရမှာပါ။ ပြသနာက ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး အရှိန်အဟုန် မြင့်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တောင် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရကြီးထွားမလာသေးတဲ့ လူအနည်းငယ်ကို ရဲက ဘာလို့လွှတ်ပေးထားခဲ့ပါသလဲ။
ဟိုးအတိတ်အဝေးကို ပြန်မပြောပါနဲ့ ဦး။ လောလောလတ်လတ် လက်ပန်းတောင်းတောင် ၊ မအူပင် အရေးတွေမှာ ပြည်သူ့ ရဲတွေအအုပ်အထိန်းကောင်းရုံမကပဲ လက်တောင်လွန်သွားခဲ့ကြသေးတာပါ။ အဲဒီလိုဆို အားလုံးက ၀ိုင်းအပြစ်တင်မှာ စိုးလို့ ပါ ဆိုရင်လည်း ပြသနာကြီးလာနိုင်ရာကနေ ၊ အလွန်အကျွံ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်တဲ့မီးလောင်ပြင်တွေ ၊ စစ်မြေပြင်တစ်ခုစာ အလောင်းတွေ ပုံလာတဲ့အထိတော့ နှိမ်နင်းဖို့အမိန့် မရတာပါလား။အမိန့် မရရင် တစ်ကယ်ပဲ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ အစည့်း့အမှန်တစ်ကယ်ပါလား။ အဲဒါဆိုရင် လက်ပန်းတောင်းတောင်နဲ့ မအူပင်မှာက ဘယ်သူအမိန့် ပေးလို့ ပါလဲ။ အမိန့် ပေးသူကို ဖော်ပေးပါ။ တစ်ကယ်က မြန်မာနိုင်ငံကရဲတွေဟာပြသနာအနံ့ နဲ့ဘယ်လို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရတယ် ဆိုတာကို လေ့ကျင့် ကျွမ်းကျင်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ
မိထ္ထီလာ NLD မွတ်ဒေါင်းတွေ အုပ်စိုးနေပြီလို့စကားသံတွေ အရင်လွင့်လာပါတယ်။ on line မှာ မိထ္ထီလာဆိုတဲ့နမိတ်တွေ မဖြစ်ခင်က ကြိုပြတဲ့သူက ပြနေခဲ့ကြတယ်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတယ် ဆိုရင်တောင်ရန်စစော်ကားသလို ၊ အကြမ်းဖက်သလို၊ ဇွတ်အမိန့်ပေးသလိုတွေ မိထ္ထီလာမှာ လုပ်လာခဲ့တယ်။ လက်ပန်းတောင်းမှာ ဒေါ်စုအကွဲပဲလို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ မိထ္ထီလာအရေးဖြစ်တာနဲ့ဦးဝီရသူ ရောက်လာတယ်။ ပေါ့စေလို လို့ လား၊ ဘေးဖြစ်စေတဲ့ဆေးလား ။ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပေမယ့် လုပ်သင့်မလုပ်သင့် တွက်ကြည့်တဲ့အခါ အစ္စလမ်တွေက ဦးဝီရသူကို ချစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ ရဲ့ တရားတွေကြောင့်ပဲ လန့် နေခဲ့ကြတာ ၊ကြောက်နေကြတာက အသေအချာပါ။ ကယ်ဖို့ သွားတယ်ဆိုရင်တောင် ကြောက်ကန်ကန်ပြီး အလွဲတုန့် ပြန် နိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ စဉ်းစားစရာပါ။
အဲဒီလိုနဲ့မိထ္ထီလာဟာ သွေးပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မိထ္ထီလာကိုယ်တိုင် သွေးပျက်သွားခဲ့သလို ၊ မိထ္ထီလာကပဲ လူအများကိုပါ ပြန်ပြီးတော့ သွေးပျက်လာစေခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်က သူတို့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆရင် အနံ့ သဲ့သဲ့လေးရရုံနဲ့ တောင် အမြစ်ပါမကျန်အောင် မြေလှန်ရှင်းထုတ်တတ်မြဲဖြစ်တဲ့ အစိုးရရဲ့စစ် ၊ ရဲ ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်အသီးသီး ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မညံ့ ခဲ့တဲ့အပြင်ကြက်သီးထစရာကောင်းအောင် တော်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက သက်သေကောင်းပါ။ တုတ်တုတ်လှုပ်လို့ တောင်မှ မရခဲ့တာပါ။ အစိုးရမတူလို့ လို့မပြောပါနဲ့ ။ လူမပြောင်း စံနစ် ပြောင်းယောင်ယောင် အစိုးရဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါ။
မိထ္ထီလာငြိမ်တော့ အဖျက်သမားလို့ယူဆရပါတယ်ဆိုတဲ့ သာမန် ခိုးဆိုးနှိုက်တွေပဲ အမိပြပါတယ်။ ခွာစစ်က စံနစ်တကျ ပြန်ဆုတ် သွားကြပါတယ်။ နောက်မြို့ တွေဆီကို စံနစ်တကျပဲ ရွေ့ လျားကြပါတယ်။ စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးပြကြပြန်ပါတယ်။ စံနစ်တကျပဲ ၀ါဒဆက်ဖြန့် ပါတယ်။ စံနစ်တကျပဲ အကြောက်တရားရယ် ၊ သံသယရယ် ကို သပ်လျှိုထည့်ပေးကြပြန်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်က ကောလဟာလရယ် ၊ အကြောက်တရားရယ် ၊ သံသယရယ်ကို လူအုပ်ကြားကို ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းပါ။ ပေါ့ပေါ့လေးလို့ကျွန်တော်တို့ ထင်နေရင် မှားကြတော့မှာပါ။ ဒီနေ့ ၁၄၄ ထုတ်လိုက်တဲ့မြို့ တွေကို့ ကြည့်ရင် ပျံ့ နှုန်းဘယ်လောက်မြန်အောင် သူတို့ လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြရပါလိမ့်မယ်။
ဒီပဲရင်းလူသတ်ပွဲရဲ့ဖန်တီးရှင်လက်ရာတွေ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်းရဲ့မွေးရပ်နယ်က ပျောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့
လူမိုက်တွေရဲ့ အကြောင်း၊ မြန်မာပြည်က ဦးတေဇထက် ချမ်းသာတယ်လို့အဆိုရှိတဲ့ ဦးအောင်သောင်းသား ပြည်အောင်ရဲ့ရူးသွပ်မှုနဲ့ စည်းစိမ်နောက်ခံအင်အား ၊ စာဖတ်နေသူကြီး အယုံကြည်ဆုံး အားအကိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ သက်တော်ရှည်အမတ် ဦးအောင်သောင်း၊ ဖိုးလပည့်ရဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် ဒေါသအမျက်တချောင်းချောင်း ခံစားသွားခဲ့ရတဲ့ အနားယူ စာဖတ်နေတဲ့သူကြီးရဲ့အတ္တမာနကို ထိပါးသွားရမှု တို့ က အများကြီး ထည့်စဉ်းစားစရာပါ။
ဦးရွှေမန်းဟာ နအဖထဲမှာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် နေရာပေးခြင်းနဲ့နှစ်အတော်ကြာ မြှောက်စားခံခဲ့ရတာပါ။ အနာဂတ်ရဲ့ သမ္မတလို့တပ်တွင်းမှာ သဘောပေါက် နားလည်ထားခဲ့ကြတာပါ။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် မျှော်မှန်ခိုင်းထားခဲ့တဲ့သူရမြင့်အောင်ကို ဇွတ်နားစေခဲ့တာ ၊ လွှတ်တော်မှာ အစိုးရဖွဲ့ တဲ့အခါကြတော့မှ သမ္မတပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော် ဥက္ကဌပဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရတာတွေက အာဏာရှင်ကြီးရဲ့အနီးကပ် လျပ်တစ်ပြက် ရိုက်ချက်ပါ။ အဲဒီနေ့ က ဦးရွှေမန်းမိန်းမ ဒေါ်ခင်လေးသက် သူ့ အိမ်မှာ လာသမျှလူကို ဦးသန်းရွှေမကောင်းကြောင်း အော်ဟစ်ဆဲဆို ငိုကြွေးကျိန်ဆဲနေခဲ့တယ်ဆိုတာ သိမြင်ကြားကြသူတွေ မနည်းရှိခဲ့တာပါ။
အဲဒီအချက်က အရေးမကြီးဘူးလို့ ယူဆလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ သမ္မတရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ၊ တရားဥပဒေရဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာ စိန်အခေါ်ခံရပြီး ဥပဒေပြုရေးအာဏာကသာ ကျန်အာဏာနှစ်ရပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် လွှမ်းမိုးသွားလိုက်နိုင်နေပြီ ဆိုတာ ဒီနေ့ နိုင်ငံ့အရေးကို စိတ်ဝင်တစား၇ှိတဲ့သူတိုင်း မြင်တွေ့ လက်ခံထားနေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဥပဒေခုံရုံးကိစ္စ ၊ စာရင်းစစ်ချုပ် ကိစ္စတွေသာမကပါဘူး။ အခုနောက်ဆုံး မိထ္ထီလာ ပြသနာမှာ နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်သမ္မတက ၊ အတိုက်အခံ လွှတ်တော်အမတ်နဲ
သာမက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့ ပါ ပူးတွဲ သဘောတူညီချက် ထုတ်ပြန်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအရေးအခင်းတွေမကြာခင်က ဦးခင်ညွန့် ကို ဦးရွှေမန်းက တရားဝင် ပွဲထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
Eleven မီဒီယာဟာ ဦးရွှေမန်းသားရဲ့ရှယ်ယာ အများစုပါတာ.. ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေနဲ့ဦးခင်ညွန့် ဟာ ဗိုလ်ချုပ်တင့်ဆွေရဲ စံနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်မှုအောက်က ရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့ ဂိုဏ်းတူသွေးသောက် ညီအကို တွေ ဖြစ်နေခဲ့တာ… ဦးခင်ရွှေဟာ ဦးရွှေမန်းရဲ့ခမည်းခမက် ဖြစ်နေခဲ့တာ.. တိုးနိုင်မန်းဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာသာမက အနာဂတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအထိပါ မျှော်မှန်းထားတာ …တွေဟာ ဆက်စပ်ကြည့်တဲ့အခါ ကြောက်စရာ ကောင်းနေတဲ့ ပေးထားချက်တွေအဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။
သမ္မတကြီးဟာ အရုပ်ပဲ ၊ ရုပ်သေးပဲ ၊ ကြိုးဆွဲခံနေရတဲ့သူပဲဆိုတာ ဒီနေ့ အထိ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ တိုင်းပြည်အခင်းအကျင်းတွေကိုကြည့်ရင် သိသာနေခဲ့တာပါ။ ဦးရွှေမန်းဟာ သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့သူပါ ။ သွေးအေးပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပါတယ်။ အကြံကြီးပါတယ်။ အကွက်စေ့ပါတယ်။ လုပ်ရဲပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းအနည်းငယ် လန့် နေတဲ့အရာက တပ်ချုပ်ကြီးပါ။ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ပါ။ အခုအချိန်ထိတော့ တပ်ချုပ်ဟာဦးရွှေမန်းကို ခါးသီးပါတယ်။ မနှစ်မြို့ ပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း ဖုံးကွယ်မထားပဲ တပ်တွင်းတွေ့ ဆုံပွဲတွေမှာ အလျဉ်းသင့်သလို ထုတ်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းရဲ့မဲဆန္ဒနယ်က တပ်ချုပ်ရဲ့ပိုင်နက်ဧရိယာအတွင်းမှာ ရှိနေပြီး လိုအပ်ခဲ့ရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်အဖြစ်က ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ဖို့မဲလက်မှတ်တွေကို အဆင်သင့် စုဆောင်းထားရှိပြီးပြီ ဆိုတာကိုပါ ဥိးရွှေမန်းကိုပါ သိရှိစေခဲ့သူပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဦးရွှေမန်းဟာ တပ်မတော် ဘတ်ဂျက်အပါအ၀င် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ တော့ပဲ လိုက်လျောပေးခဲ့သလို ၊ ဦးသန်းရွှေ အကြိုက်သဘောတွေ့ နိုင်တာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့အသည်းအသန် ကြိုးစားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သမ္မတဟာလည်း လက်ရှိရုပ်သေးအာဏာကိုတောင် တည်မြဲဖို့ကာချုပ်ကို အားကိုးနေရတဲ့သူ ဖြစ်လို့ လာပါတော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံအ၀ှမ်းက မငြိမ်မသက်မှုတွေက အတွင်းမှာ နက်ရှိုင်းကြီးမားတဲ့ ရန်သူရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းနိုင်တာထက် ကြီးမားတဲ့ ဆင်ကွက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သာမာန် ဘာသာရေး အဓိကရုန်း ၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုန်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီ အငွေ့ အသက်ကလေး နည်းနည်းပါးပါးရလာအောင် ပန်းခင်းတဲ့လမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သမ်းလာခဲ့ကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတွေ ၊ မျက်ရည်တွေ ၊ အသက်တွေ ၊ ဘ၀တွေ နဲ့ဆင်းရဲမှုအထွေထွေကို ရင်းလာခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလောက်ရင်းထားခဲ့ပြီးမှတော့ ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့သူတစ်ပါးကို ဖျက်ဆီးခွင့်ပေးလိုက်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ မူဆလင်တွေရော၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရော ရဲ့ဘုံရန်သူက စစ်အာဏာရှင်တွေပါ။ အတူတူတိုက်ပြီး အတူတူပဲ ရင်စည်းခံလာခဲ့ကြရတာပါ။ ခံခဲ့ရတဲ့သူအချင်းချင်း သခင်အားရအောင် ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ပေးကြမလား။ အတူတူမပြီးဆုံးသေးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆက်တိုက်ကြမလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ တွေ ခွပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ခွပ်နေလိုက်ကြတာ ၊ ယာလည်းညက်စေ၊ ကြက်လည်း ပန်းစေ ဖြစ်တဲ့အခါမှ အဆင်သင့် ရိုက်သတ်မယ့်သူက အဆင်သင့်ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ တန်ခိုးရှင်လို အရာတွေကို အားကိုးမျှော်လင့်နေတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ အသိညဏ်ရေချိန်ကို တိုးမြှင့်ကြည့်ပြီးသတိကြီးကြီးနဲ့ကိုယ့်ဘ၀တွေကိုယ် ကာကွယ်ကြမှ ဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေကို ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ ဟာ အာဏာအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကို ၊ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ဘာမဆို လုပ်ရက်နိုင်တဲ့ အာဏာရူးကြီးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို ကျွန်တော်တို့ သတိနဲ့ ဆင်ခြင်မှသာ ရပါလိမ့်မယ်။ ။
I don't know about you but I am VERY tired of waiting for the next election. Please cut short our ordeal of waiting, speculating, postponing holidays etc and hold the elections asap. I'm fed up of the mudslinging and the misinformation given through many forms of media to make opponents look incompetent, immoral or useless not forgetting worn-out plots (especially sex videos) and over-used scripts. The recycling of sex video attacks is evidence of the state of neurons in the minds of some who are prime candidates of the competition for Air-Head of the Year. Don't they have any other thing to do apart from insulting our intelligence? Sighs...
It is about time responsible leaders exhort us to vote for the character ofacandidate based on their campaign manifesto, aspirations, ideas and service record. To that end, each of us must take responsibility and do our homework by undertaking research to find out the background and worthiness of the candidates without being influenced by any other kind of political propaganda. Then only can we rightly vote for the best candidate.
At the rate we are being fed onastaple diet of disinformation and misinformation, whither Malaysia?
CLICK HERE forapaper on misinformation.
This link reports that "an intriguing new study released last week in Psychological Science in the Public Interest reveals why people are more apt to believe false information being fed to them by the media and politicians.
According to the team of psychological scientists working on the study, led by Stephan Lewandowsky of the University of Western Australia, the main reason that people are more likely to believe false information (for example, that climate change isahoax) is because it actually takes less brain power to believeastatement is false than to accept it as truth. Finding the truth takes time and effort that people often don't care enough to spend on particular issues that aren't of immediate concern.
Even worse, efforts to retract misinformation often backfire, paradoxically amplifying the effect of the erroneous belief. CLICK HERE for more.
Time carried an article here which discusses the same research and why misinformation sticks and corrections can backfire.
Sora Sing's The Upside of Gossip: Social and Psychological Benefits discusses how engaging in behind-the-back talk actually had meaningful social benefits. It lowered gossipers' stress, prevented exploitation and promoted more generous behavior.
This site also reported something interesting:
In some respects, the survey is heartening. Nine in 10 voters believed they'd seen ads that were misleading or false, and more than half of the voters thought such ads wereafrequent occurrence — and that the misinformation was accelerating. Why is this good news? Because the more skeptical people become about political ads, the more likely they are to disbelieve all political ads. It's the only rational approach at this point, given our political system's unwillingness to address the poison it spews, and I hope that by 2012 the public will haveauniversal belief that any political advertisement they see is probablyalie. MORE HERE.
The Washington Post says that misinformation is the norm at political conventions and discusses how "by its very nature, that means downplaying unpleasant facts, highlighting the positive and knocking down the opposing team."
So, what then should we do? Read carefully and cautiously. Think, analyze and then only accept it if you are fully convinced it is the truth.
Check out my post on The Politics of Misinformation.
When writing this post, I realized that so many types of governments have this problem. Then, why do even more succumb to both disinformation and misinformation???
In closing, allow me to quote from THIS BLOG:
Something that should be very concerning to progressives is the trend on the so-called liberal media, which has now become obsessed with reporting on every single "outrage" committed by Republicans and the right wing. The reporting mainly serves to inflame emotions of the "liberal" viewers, but really have very little effect on addressing the real issues we should be confronting. CLICK HERE for more.
If there is any reason why the situation is so bleak in this land, it is largely due to the pathetic standards of education. Whoever it was that made all the wrong decisions effectively destroyed our human resources, the pool of leaders, thinkers and citizens who could together develop Malaysia.
Alas, with the slow death of the thinking mind and the manner in which we are losing our international or even regional competitiveness, I dread to think of the kind of messages and information that we may get in the future. Just takealook at how some politicians respond to citizens who express their concerns about mega projects. CLICK HERE to readaletter written by an old friend whom I have not seen for many years. Is it wrong to question when it appears that ome decisions seem to have been made without public consultation or EIA and then the public are confused about subsequent statements?
If you do have time, please read Lies, Damn Lies…and What We Believe Anyway by Jeff Cobb where he dargues that fundamentally, we need to place more emphasize than ever on developing and practicing good learning habits – like critical thinking and reflection – that prevent misinformation from making inroads in the first place.
As the report suggests, once the truth gets twisted, straightening it back out is no easy matter.
Posted: 28 Mar 2013 12:51 AM PDT
" မြန်မာ ဟာ မြန်မာပါဘဲ ကွယ်"
ထွက်ပြေးမဲ့ အထဲ ဒို့မပါ။
* အတိတ်ရိုင်းခဲ့သူတွေ မဟုတ်ခဲ့လို့၊
* မညီညာ လို့တော့ မပြောလာပါနဲ့၊
ယ္ခု ဘဝရဲ့ ဘာသာရေးတဲ့လား? ။
* လောကီဓမ္မတာတွေကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး၊
လောဘ တဏာတွေ ဖုန်းနေသူတွေ ကိုဖြင့်၊
မကွယ်မဝှက် တစ်ကယ် အပြတ် ပြောခြင်သပါ့၊
ယ္ခု ထိ ဒို့တွေမှာ–
Mudita Way Phyar
Posted: 27 Mar 2013 09:24 PM PDT
I am listening to this now... just watching off and on - and though I didn't think it would be, it is good. And interesting story ofawoman brought back from the brink of death.
To be honest, I didn't want to watch it. I looked at it lying in the e-mail fromadear friend, and in my head I said: Oh no,acancer thingy. Must I...?
But, because it was sent by someone I love, and respect; and because she is not about fluff and rubbish and oh-you-must-find-god-and-be-saved-before-you-die, I decided that I'd would. Watch it, I mean.
Now, I'm glad I did. It wasn't what I thought it would be. And I love her message. And I love her sense of who she is and her radiating smile and happiness. And her love for her husband who makes meaning in her life.
Led by the interviewer, she goes back and forth in the vid, and all of it was not for me. Like heaven, for instance. I am not interested in whether she saw heaven or not. I think heaven isastate of mind, and if it is - for me,abig IF - it is nothing like the books proclaim: with angels and harps and idiot cherubs in diapers. I'm pretty sure I'm right about that!
But, I was interested in her experience of consciousness when in her 30-hour coma, and that she could feel her husband willing her to return to them; hear her mum crying; hear the doctor telling them that her organs were failing - and do I remember it right... that he said that outside her room?
I remember my dad's last days were spent inacoma. Could he hear us? DID he hear us around him? How were we to know, I remember wondering. I do remember that I respected the sense of his still-being-there. I remember playing him John Denver, and sitting with him and singing along - because that is what he liked: music, and us singing.
But I like her message of 'live life without fear'. Her life could be mine - minus the cancer, the coma, and the fact that she'sabig-time author! Hahahah! This need to be good, to not let anyone down, of needing to succeed. That's me. Especially when I was still at home. Then, I got married and Chuan helped meabit with that, but there was stillalot of stress and fear in me. The driving need to do, do, do stuff and get somewhere . . . .
For me, it has been growing older and older that has been freeing. My hysterectomy was the start, for some reason. In 2001, I had it, and my life changed ... the raging and mixed-up hormones had started the process of this freedom I felt, and the hysterectomy sealed my fate, I think. ( Hysterectomy isabad-word these days, and even then, it was something that wasalast resort, and of questions and why-did-you-let-them-do-it all the time. At the time, it wasadecision we talked about, and made, and it was the right one. For me.)
And then, I turned 50 in five years, and I was ready for this new me: Freedom from it all. How I looked, what I did, what people thought - I found I no longer gave an effing damn. That is why I have always said that turning 50 was freeing - but it isaprocess, and there is no way you are going to wake up on your fiftieth birthday and have the shackles just fall away. So, yah, it wasaprocess, and bit by bit, I got there.
And that is where I am now. My art/painting happened like two years+ ago. And it happened at the right time, for me. It couldn't have happened any earlier - because if it did, I'd not be where I am now with it. For sure! The old me - the before 50 me - would not even have taken upabrush and dipped it in paint - because she would have been afraid that people would laugh, that it would look stupid, that the colours would be all wrong... endless reasons for me to not even try.
For me, EVERY effing thing I did, I needed to excel in. To be the best. To be an expert and way-up-there in the field. And, toacertain extent, I was. Because I was blessed withagood brain (god or DNA, I have no idea) .
But, when I know longer worried of what people would think, I was in the right place to let Donna Dewberry
'speak' to me on the You Tube vidafriend sent - and I let her convince me that I too could paint like she did! The old Pat would have done what she'd always done: watch the video and let the video itself be the entertainment for her! Like her exercise DVDs and her dance DVDs... hahahaha! Instead of being 'instruction' they'd have been just another thing to watch for fun!
So, yah, this wasagood thing for me to watch. It validates how I think about life now, and how I just want to do what I want to do, and to hell with everyone who doesn't like it, or like me. WHATeva!
Posted: 28 Mar 2013 02:35 AM PDT
Posted: 27 Mar 2013 09:51 PM PDT
The new address reads: Kota Kinabalu, Sabah, The Philippines.
This is the directive given by the Foreign Office in Manila to all Pinoys when addressing Sabah in all correspondence, official or not. No more 'Sabah, Malaysia'.
The government of President Aquino is now supporting self-proclaimed Sulu sultan Jamalul Kiram in his claim on Sabah. Indirectly, they also support the intrusion by the Suluks in Lahad Datu.
So, it is clear that Malacanang wants Sabah and didn't recognise UN recognition that the state belongs to Malaysia.
Manila is also forgetting that Indonesia will not allow that to happen as it shares the land border with Sabah and Sarawak. If Manila putsaclaim on Sabah, Jakarta too (I believe) has more rights to do so but the Indonesians have accepted the fact that Sabah is Malaysia.
What the Philippines do could sparkawar in Southeast Asia!
DFA spokesman Raul Hernandez said Malacañang issued Memorandum Circular 162 dated Aug. 20, 2008 entitled "Guidelines on Matters Pertaining to North Borneo (SABAH)" to government departments with regard to any act or statement expressing or implying, directly or indirectly, any recognition ofaforeign state's sovereignty over Sabah,aPhilippine territory.
"I understand the subject of whether or not to refer to Sabah as being part of Malaysia was mentioned in that meeting," Hernandez said.